Dowladda federaalka oo samaysay guddi ilaalinaya heerka tayada maciishadaha debeda laga keeno – Radio Daljir
Oktoobar 13, 2013 3:30 b 0
Muqdisho, October 13, 2013 – Wasaarada ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay bilaabayso nidaam lagu ogaanayo ganacsiga dekedaha ka soo dega iyo tayada ay leeyihiin, xili inta badan la sheego dad badan oo dhibaato ka soo gaarto cunto ay cunaan.
Wasiirka ganacisga iyo warshadaha ee Soomaaliya Maxamuud Xasan Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladdu ay samaysay guddi balaaran oo ilaalin doona waxa ka soo degga dekedaha dalka, gaar ahaan dekeda Muqdisho oo ah tan ugu wayn ee ay gacanta ku hayso dowladdu.
Qorshahan ayaa ah mid looga hortegayo in dalka la soo geliyo cuntooyin ama daawooyin dhacay ama sumaysan, waxaa uu wasiirku uga digay ganacsatada Soomaaliyeed in ay iska ilaaliyaan soo gelinta dalka ee maciishada dhacday.
Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamuud Xasan ayaa intaas ku daray ?Ganacsiga dalka imaanaya waa inuu noqdaa mid caafimaadka bulshada u wanaagsan, waana taas sababta keentay inaan sameyno guddi baaritaanno ku sameeya ganacsiyada kala duwan ee? dalka soo galaya.?
Wasiirka ayaa waxaa uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed wakhtigan in ay u soo jeensadaan in ay la xisaabtamaan dowladda maadama laga baxay xiligii KMG ahaa, waxaa uu sheegay in wasaaradiisa ay diyaar u tahay in ay horumariso ganacsiga Soomaalida iyo caafimaadka dadka.
Mudane Seysey ?Askarta iyo shaqaalaha dowladda hala siiyo mushaarkooda waa muhiim xilliga Ciida?